के गर्दै छन् डा. सीके राउत ?
काठमाडौं- फागुन २४ गते सरकारसँग ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरी देश विखण्डको मुद्दा त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका डा. सीके राउत अहिले के गर्दैछन् त ? सहमतिपछि फाटफुट कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका राउतको आगामी रणनीति के छ भन्नेबारे धेरैको जिज्ञासा छ।
‘स्वतन्त्र मधेस’ को माग गरी राजनीतिमा उदाएका डा. राउतले मधेसलाई नै आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्र बनाएको देखिन्छ। मधेसलाई आधार क्षेत्र बनाएकै कारण अन्य मधेसी दलप्रति राउत आक्रामक छन्। उनी पछिल्लो समय नेकपा र कांग्रेसप्रति खासै आक्रामक देखिएका छैनन्।
पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनी सार्वजनिक रुपमा देखिएका थिए। वैशाख १८ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अडिटोरियम हलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले युवा विद्यार्थीलाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्न खोजेका थिए।
उक्त कार्यक्रममा उनले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वरुपको हुने दाबी गरे। बुद्धले देखाएको मार्ग दर्शनमा आधारित पार्टीको गतिविधि रहने पनि सुनाए।
कहाँ पुग्यो दल दर्ता?
नेपाल सरकार र राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच फागुन २४ गते ११ बँुदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठक चैत ३ गतेबाट सिरहाको लहानमा भएको थियो। परिषद् बैठकबाट जनमत पार्टी गठन गर्ने निर्णयमा डा.राउत पुगेका थिए।
गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयअनुसार वैशाख १५ गते राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीमा ३५ जना केन्द्रीय सदस्य छन्। उक्त दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रियामा रहेको छ।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंहका अनुसार दल दर्ताको प्रक्रिया अन्तिममा छ। आयोगमा निवेदन दर्ता भएपछि पटकपटक छलफल भइसकेको उनले जनाए। सिंहका अनुसार आउँदो साता दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने सम्भावना छ।
जनमत पार्टीको विधानले नेपालको संविधान र अखण्डता स्वीकार गरेको छ। तर मधेससँग सम्बन्धित कतिपय विषय खुलाइएको छैन।
मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्दै
११ बुँदे सहमतिअनुसार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ।
राउतमाथि पनि करिब आधा दर्जन मुद्दा छ। उनीसहितको मुद्दा गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। करिब ३ सय जनाको मुद्दा गृहमा बुझाइएको नेता सिंहले जानकारी दिए।
मुद्दा फिर्ता प्रक्रियाको नेतृत्व गरिरहेका सिंहले भने, ‘हामीले विवरण बुझाएपछि गृहबाट प्रत्येक जिल्लामा पत्राचार भएको छ। जिल्लामा मिल्न सक्ने मुद्दा जिल्लामै मिलाउने काम हुँदैछ भने केन्द्रबाट हुनुपर्ने कामका विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
राज्य द्रोहको मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया लामो भएकाले अझै केही दिन समय लाग्ने उनले बताए।
संगठन निर्माण र सदस्यता वितरण
जनमत पार्टीले प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा जनपरिचालन समिति गठन गर्दैछ। पार्टी दर्ता भइनसकेकोले जनपरिचालन समिति गठन गरी सदस्यता वितरणको तयारी गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानका अनुसार जिल्ला तथा क्षेत्रमा जनपरिचालन समिति बन्ने क्रममा छ। ‘पार्टी दर्ता भएलगतै सदस्यता वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ’, खानले भने, ‘यसअघि अनलाइनमार्फत पनि सदस्यताका लागि निवेदनहरु आएको थियो। उक्त निवेदनमाथि पनि हेरविचार हुनेछ।’
के छ अबको रणनीति?
दल दर्ता भएपछि राउतले मधेसका प्रत्येक स्थानीय निकायमा जनसभा गर्ने तयारी गरेका छन्। पहिलो चरणमा क्षेत्रगत आधारमा जनसभा भएपछि स्थानीय तह केन्द्रित सभा हुनेछ। डा. राउतको पार्टीसँग एकताका लागि केही दलसँग छलफल चलिरहेको छ। राउत अब संगठन विस्तार गरी जनलोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि सार्ने पक्षमा रहेको बुझिएको छ।